Wifi maikorosikopu, Vhidhiyo maikorosikopu, Veterinary maikorosikopu - Opto-Edu
E24 Lab Plastiki Ware
E41 Matenga Ekushandisa
Kugadzira nharembozha, maikorosikopu yestiriyo ndechimwe chezvishandiso zvinonyanya kukosha. Iye zvino tine mhando nyowani A23.3645N-R dzakateedzana nerabha pad, digital kamera, LCD skrini zvese zvakabatanidzwa kuti zvive nyore kushanda! A36.4952 ndeye yakasimba mhando iyo ine hombe 1080p skrini, yakawedzera kumashure yekutarisa knob uye mbiri LED mhete mwenje kuti uone marudzi ese chinangwa ne zoom lens pachiratidziri!
Inverted Microscope, iri "inverted" vhezheni yeiyo chaiyo microscope, zvese magetsi sosi uye condenser yakamisirwa kumusoro pamusoro pechikuva ichinongedzera pasi padanho, nepo zvinangwa uye chinangwa turret chiri pasi pechikuva chakanangisa kumusoro, Yakagadzirwa muna 1850 naJ. Lawrence Smith, vaicherekedza masero mapenyu kana zvipenyu pazasi petiri dhishi kana nyama yemaitiro. Biological inverted microscopes inogona zvakare kupenya yakajeka, chikamu musiyano, kana epi fluorescence mabasa futi.
Stereo maikorosikopu akakosha maturusi ekuona uye kutarisa madhaimani, jewlery, ikozvino, neichangobva kugadzirirwa zvese-mu-imwe LCD dhijitari scree uye LED mwenje sosi, A36.3601 uye A36.1210 yakawedzera simba uye nyore nyore kumutengi wedu, anoda kuona zvakajeka mukati medhaimani!
OPTO-EDU (Beijing) Co .. Ltd. inonyanya kushambadzira kweakakwira-magumo zvigadzirwa zvemagetsi uye zviridzwa zvekudzidzisa kubvira 2005. Seimwe yeanonyanya kugonesa uye akasimba manyowani uye ekudzidzisa zvigadzirwa zvekutengesa vatengesi muChina, isu takanangana neiyi ndima kweanopfuura makore gumi nematanhatu. OPTO-EDU yakave yakagadzirirwa kugadzirisa dhatabhesi izere yeOptical & Yekudzidzisa chiridzwa chakagadzirwa kuChina, chakanangwa kuve chaicho One-Stop Supplier yemakorosikopu & zvinhu zvekudzidzisa. Parizvino, isu tine anopfuura 5000+ mamodheru uye 500+ nyanzvi vagadziri mune yedu yekupa cheni system. Kubva pazvinhu zvepakutanga-zvekupinda-chikamu zvigadzirwa kune zvine hunyanzvi mhinduro, tinosangana zvakasiyana zvidikanwi zvevatengi vakasiyana mune zvekurapa, zvekutsvaga kwesainzi, dzidzo, indasitiri, kurima uye maindasitiri akasiyana siyana zuva rega rega.
A16.1095 Yakazara Inotya Inverted Fluorescent Mi ...
A16.1092 Inverted Fluorescent maikorosikopu, LCD T ...
A16.1091 Inverted Fluorescent maikorosikopu, Semi -...
A14.1092 Inverted Biological maikorosikopu, LCD Kuti ...
A14.1091 Inverted Laboratory maikorosikopu, Semi-A ...
A16.1065 Inverted LED Fluorescent maikorosikopu, B ...
A14.1065 Inverted Biological Pasika Kusiyanisa Mic ...
A13.1090 Inverted Metallurgical maikorosikopu, Sem ...
A36.1502 9 LCD Dhijitari Stereo maikorosikopu, 5.0M
A12.1095 Ongororo Scientific Laboratory Microsc ...
Yedu hombe 30000+ maikorosikopu odha kuBangladesh muna 2019
Mu2018, mutengi wedu muBangladesh akatiudza kuti vaizoenda kuhurumende thenda, kwemazana anopfuura mazana matatu emamikorosikopu, nemagwaro epamutemo. Iyo nyoro yakanangana nekupa microscope yevadzidzi kuzvikoro zvinopfuura 10000+ munyika yeBangladesh, inogonesa vadzidzi vepuraimari & yepakati chikoro ...
Tinokunda nyoro kuhurumende yeBolivia ye1980 pcs microscope muna 2019
Mu2019-02, mutengi waOpto-Edu anobva kuBolivia akatizivisa neemail kuti, yedu faira nyoro ye3 maikorosikopu mamodheru akazara ma1980 pcs akahwina hurongwa hwehurumende yethenda! Isu tinofanirwa kupeta zvakapetwa zvese zvakatsanangurwa, mutengo, mutengo wekutumira uye nguva yekuendesa yeaya mamodheru ipapo, uye zvese ...
Shanyira & tarisa maikorosikopu mhando isati yatumirwa kuDenmark mutengi kodhi muna 2019.
Opto-Edu ane mutana wekare kubva kuDenmark kweanopfuura makore gumi nemashanu, achiraira anopfuura makumi matatu maikorosikopu mhando kwenguva yakareba, kutengesa vhoriyamu pamusoro pe1000 kusvika 1500 pcs gore rega. Kunyangwe yega yega odha haina kukura zvakanyanya, asi sezvo zvaisanganisira akawanda mamodheru, mutengi ane zvakawanda zvakadzama zvinodiwa kubva kune logo kudhinda, pendi ruvara, kurongedza c ...